"Nabad Ayaan Doonayay, Waxaan U Qoray Warqad..." Yaya Toure Oo Ka Sheekeeyey Sidii Xumayd Ee Guardiola Ula Dhaqmay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha Maanta“Nabad Ayaan Doonayay, Waxaan U Qoray Warqad…” Yaya Toure Oo Ka Sheekeeyey Sidii Xumayd Ee Guardiola Ula Dhaqmay
“Nabad Ayaan Doonayay, Waxaan U Qoray Warqad…” Yaya Toure Oo Ka Sheekeeyey Sidii Xumayd Ee Guardiola Ula Dhaqmay
Xiddigii hore ee reer Ivory Coast ee Yaya Toure ayaa daboolka ka qaaday dagaalkii dhex-maray Pep Guardiola xilli ciyaareedkii ugu horreeyey ee ay Manchester City iskugu yimaaddeen iyagoo horena iskugu soo dhacay waqtigii ay Barcelona wada joogeen.
Yaya Toure ayaa shaaciyey in uu warqad raalligelin ah u qoray Pep Guardiola si uu iskugu dayo in uu soo afjaro xurguftooda muddada dheer soo taagnayd oo ay dib usoo noolaysay hadal uu laacibkani sheegay waqtigii uu tababaruhu kusoo jeeday City, kaas oo ahaa in uu si xun ula dhaqmo ciyaartoyda Afrika kasoo jeeda.
Toure oo guulo badan ku hoggaamiyey Man City intii u dhaxaysay 2010 illaa 2018kii, ayaa si aan fiicnayn kaga tegay kooxda kaddib markii uu Guardiola kaydka dhigay, isla markaana uu dhalleecayn u mariyey warbaahinta, xilli taageereyaashuna ay la safnaayeen laacibka reer Ivory Coast.
Waqti uu waraysi siinayay Daily Mail, ayaa waxa uu Yaya Toure qirtay in uu sameeyey qalad weyn xilli uu waraysi siinayay wargeyska France Football, kaas oo uu ku dhalliilay Pep Guardiola, halkaas oo ay ka unkantay xurguftooda dambe.
Yaya ayaa yidhi: “Waraysigaasi wuxuu ahaa qaladkaygii weynaa ee aan sameeyey. Marka aad daacad-hadasho ee codkaagu uu ku sallaysan yahay qof kale, adiga ayaa lagaa soo horjeedsanayaa.
“Waxa aan ogaa in shaqaaluhu aanay ku farxanaynin hadalkayga. Waxa aan u diray warqad si aan iskugu dayo in aan xidhiidh la sameeyo dadka muhiimka ah oo halkaas jooga, aanan u raalligeliyo anigoo u sheegaya in aan ceebeeyey kooxda, laakiin wax jawaab ah kama helin.
“Waxaan doonayay nabad. Maanaan doonayn in tani dhacdo mar walba. Jacaylak taageereyaasha, jacaylka kooxda, mararka qaarkood waa in loo xalliyo sida ugu saxsan. Waxa aan xidhiidh la lahaa dadka halkaas joogay qaarkood.”
Muxuu waraysiga khilaafka abuuray ku yidhi Yaya Toure?
Toure oo waraysiga bixiyey sannadkii 2018kii, ayaa Guardiola ku eedeeyey in aanu jeclayn ciyaartoyda Afrikaanka ah, waxaanu yidhi: “Guardiola wuxuu ku adkaysanayaa in aanu wax dhibaato ah ku qabin ciyaartohyda madow, sababtoo ah wuu caqli badan yahay in aan la qabanin. Laakiin waxaad xaqiiqsanaysaa inuu dhibaato ku qabo ciyaartoyda Afrikaanka ah. Isagu wali ma qiranayo.
“Maalinta uu soo xusho koox shan ciyaartoy oo Afrikaan ahi ku jiraan, waxa aan ballan-qaadayaa in aan u diri doono keeg.”
Abdulfatah seaad says:
Pep waa cunsuriy waynaadey ma jecla dadka africanka ah yaye run ayuu sheegay